Filipina: Fandihizan’ireo gadra ho fahatsiarovana an’i Michael Jackson · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 11 Jolay 2010 13:11 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Português, 繁體中文, 简体中文, Deutsch, বাংলা, Español, English
Ary dia mbola nataon'izy ireo ihany izany. Tamin'ny 27 Jona lasa teo, nandihy tamin'ny hiran'itompokolahy Michael Jackson ireo gadra ao Cebu tamin'ny fampisehoana fahatsiarovana ny tsingerin-taonam-pahafatesana voalohana an'ity mpihira malaza ity.
Tamin'y taona 2007, mihoatra ny arivo ireo gadra ao amin'i Cebu, fonja avo fiarovana any amin'ny nosifaritany afovoan'i Filipina, no lasa malaza maneran-tany taorian'ny namoahan'ireo manam-pahefàna ao amin'ilay fonja tamin'ny aterineto ny horonantsary mampiseho ireo gadra mandihy amin'ny hiran'i Michael Jackson “Thriller” .
Miaraka amin'ny taham-pijerena mihoatra ny in-42 tapitrisa ao amin'ny YouTube, dia lasa iray amin'ireo horonan-tsary be mpijery indrindra amin'ny aterineto ny horonan-tsarin'ireo gadra any Cebu.
Hafahafa tamin'i Lindsay's Adventure in the Philippines ny fahitana ireo gadra mandihy.
Nandritra ireo taona vitsivitsy farany teo, dia nampiasa ny dihy ho anisan'ny fandaharan'asa “réhabilitation” izy ireo, toy ny fomba tsara hanatanjahana ara-tsaina ireo gadra. Tena hafahafa ny fahitana gadra 1000 mahery manao pataloha miloko volom-boasary manao dihy voarindra. Nisy mihitsy aza ireo vondrona mpandihy manokana mbola mahay kokoa noho ny sasany ary avahana eny afovoan'ireo mpandihy hafa.
The Fountain Yield dia nandray ireo dihy ho tahaka ny endrika fitsaboana ara-tsaina ho an'ireo gadra.
Samy mila sitranina daholo isika, samy manana zo hahazo anjara hafa indray. Ny fomba fitsaboana antsika tsara indrindra dia amin'ny alalan'ny zava-kanto. Manome fahalalahana ho an'ny fanahy haneho fihetsehim-po ny zava-kanto. Hita fa nisy ireo olana teo amin'ny fiainan'ireto olona ireto izay nahatonga azy ireo hiafara any am-ponja. Endrika fanafahana azy ireo ny fandihizana. Ankoatra ny mety hampiakaran'izany ny moralin'izy ireo. Mety hampamiratra kokoa ny fomba fijerin-dry zareo izany rehefa mivoaka ny fonja izy ireo.
Mandritra izany, Hellagood Ed's Wee Weblog nanadihady ny anjara asan'ny mozika amin'ny fanarenana ny gadra.
Odian-tsy hita ve ny zon'olombelona ao anatin'ny andrana tsy dia mety loatra ho fanakanana ny fiokoan'ireo gadra ireo, ary ny faniriana hifehy ny fihetsik'ireo gadra rehetra dia lasa doka-barotra mipoapoaka? Raha arakaraka ny heloka vita ny fanafasaziana azo dia sarotra ny mijery ireo gadra rehetra ireo hanara-dalàna satria ny heloka vitan'izy ireo miovaova manodidina ny famonoana sy ny fangalarana… Raha tena terena handihy ireo gadra, dia fanarenana toy inona no tena hotsoahin'izy ireo amin'izany?
Tamin'ny herintaona, dia mbola nandihy tahaka izany ireo vondrona gadra ireo hahatsiarovana an'i Jackson roa andro taorian'ny nahafaty azy. Ireo video ofisialin'ity fandihizana ity dia mbola tsy nivoaka taty amin'ny aterineto. Ity misy video tsy ofisialin'ny fandihizana tamin'ity taona ity: